Gufgaf|Online ३१ वर्ष लागे तक्मे बुढा, कोदोको रोटी काटेर बर्थडे !
३१ वर्ष लागे तक्मे बुढा, कोदोको रोटी काटेर बर्थडे !
कलाकार विल्सन विक्रम राई आज ३१ औँ जन्मदिन मनाउँदैछन् । ज्नमदिनको दिनमा पनि आफ्नो वेव सिरीज फुर्के नम्बर वानको छायाकंनको लागि उनी ईलाम पुगेका छन् । जन्मदिन मनाउने तयारी के छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, यहाँ त केही पनि छैन । फेरि म उपत्यका बाहिर छु । यहाँ तकेक पनि पाईँदैन कोदोको रोटी काटे मात्रै (हाँसो) ।
झापाको बिर्तामोडमा जन्मेका उनको बाल्यकाल पनि उतै बित्यो । उनी बाल्यकाल देखि नै कलाकारितामा रुचि राख्थे । ्सायद उनको यहि रुचिले होला उनी अहिले सबैको मन पर्ने कलाकार बनेका छन् ।
विल्सनको कलाकार बन्ने बाटो भने त्यति सहज थिएन । सानै देखि घरको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी मध्ययम वर्गिय परिवारमा हुर्के बढेका हुन् । उनका पिता ड्राईभर थिए भने आमाले होटेल सञ्चालन गर्थिन् । तर होटेल त्यस्तो ठूलो थिएन ।
उनी ९ वर्षको हुँदा आमाको मायाबाट सदाका लागि टाढिए । आमाको निधनपछि उनमा घरको जिम्मेवारी थपियो । एनका एक जना बहिनी र एकजना भाई छन् जसलाई उनले नै हुर्काएका हुन् ।
विल्सनको बाल्यकालको चाखलाग्दो कुरा के छ भने सानैमा उनले नेपाली सिनेमा ‘साथी’मा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । राजेश हमालको बाल्यकालको साथीको रुपमा उनले साथीमा काम गरेका छन् । साथीको युनिट सिनेमाको छायाकंनको लागि झापा पुगेको बेला उनले उक्त सिनेमामा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । यस हिसाबले उनको रहर जस्तै बाल्यकालबाटै कलाकारिताको शुरुवात भएको थियो ।
साथी सिनेमामा निर्वाह गरेको त्यहि सानो भूमिकाले नै उनी कलाकारिता प्रति अझ बढी आकर्षित भएका थिए । यति सम्मकी परिक्षाको समयमापनि स्कुलको किताबभन्दा बढी उनी सिनेमा सम्बन्धी जानकारी दिने एकमात्र पत्रिका ‘कामना’ पढ्थे । सिनेमा क्षेत्रप्रतिको झुकावकै कारण उनी आफ्नो पढाई पनि त्यति राम्रो नभएको बताउँछन् ।
हिरो बन्न आएको मान्छे हाँस्यकलाकार !
कलाकार बन्नको लागि संघर्ष गरिरहेकै बेला सुरज सुब्बा नाल्बोले उनलाई ‘सायद’ सिनेमामा अवसर दिए । ‘सायद’मा काम गर्न पाएका विल्सनलाई त्यो सिनेमा करिअरकै कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने लागेको थियो । तर सिनेमा प्रदर्शन हुन ढिला भयो । त्यो सिनेमा रिलिज नभएपछि उनलाई अरु सिनेमामा काम पाउन मुश्किल नै थियो । यहि कारण उनले फेरि गृहजिल्ला झापामा हुने महोत्सवहरुमा उद्घोषक भएर काम गर्न थाले । महोत्सवहरुमा कलाकारको जमघट हुन्थ्यो । उनी कार्यक्रम उद्घोष गर्दा पनि दर्शकहरुलाई हँसाउने गर्थे । यहि क्रममा एकदिन केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढा उनले नै सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा पुगे ।
त्यो बेलामा विल्सन भेटे जति कलाकारसँग काम गर्ने एक अवसर दिन आग्रह गर्थे । उनको यो आग्रह केदारसम्म पनि पुग्यो । त्यो भेटमा केदारले विल्सनको फोन नम्बर राखेका थिए । अवसरको खोजी गरिरहेका विल्सनले भेटमा चारवटा क्यारेक्टर केदारलाई सुनाएका थिए ।
ती मध्ये केदारलाई तक्मे बुढा मन पर्यो र ‘मेरी बास्सै’मा त्यो क्यारेक्टरलाई स्थान दिने सोच बनाए । पछि केदारले फोन गरेर ‘तक्मे बुढा’को रुपमा विल्सनलाई ‘मेरी बास्सै’मा अवसर दिने कुरा सुनाए । तक्मे भएर विल्सनले काम गरे ।
तक्मे बुढा पहिले रिलिज भयो र उनले काम गरेको सिनेमा ‘सायद’ पछि रिलिज भयो । ‘मेरी बास्सै’मा तक्मे बुढा बनेपछि उनी एकाएक तक्मे बुढाको रुपमा स्थापित भए । उता सिनेमा ‘सायद’ प्रदर्शन भएपछि पनि उनलाई अर्को सफलता मिल्यो । उनलाई लगभग एउटै समयमा दुवैतिरबाट सफलता हात लागेको थियो । त्यो खुशी सम्झेर अहिले पनि आँशु आउने विल्सन बताउँछन् ।
त्यसपछि उनले टेलिभिजन र स्टेजमा तक्मे बुढाको रुपमा सफलता पाउँदै गए भने ठूलो पर्दामा उनलाई ‘सायद’ले उठायो । ‘सायद’ सिनेमामार्फत मात्र उनले ६ वटा अवार्ड जिते । त्यस पछि त उनको कलाकारिता फस्टाउँदै गयो ।
विल्सनले सम्झना, फेसबुक, नेपथ्य, प्रोड्युशर, हमजाएगा, माई प्रमिस, वान वे, अधकट्टी, रातो घर, एम मेरो हजुर २, छक्का पञ्जा ३, साली कस्को भेनाको, ड्रिम गर्ल, रामकहानी लगायतका सिनेमामा काम गरिसकेका छन् । नेपाली सिनेमामा र हाँस्यव्यङग्यमा सफल मानिएका विल्सनले बलिवुड सिनेमामा काम गर्दाको अनुभव पनि बटुलेका छन् ।
उनले बलिउड अभिनेता शाहिद कपूरसँग ‘भाई मस्ट बि क्रेजी’ ‘बोरीवालिका बु्रसली’मा पनि काम गरेका छन् । यो सिनेमामा अभिनेत्री आयशा टाकियासँग उनले पर्दा बाँडेका छन् ।